Ma rabtaa in ay u diraan wmv video via email laakiin video tirada badan yahay xadka? Adiguna ma waxaad tahay mid ka mid ah oo keliya in uu leeyahay dhibaatadan. Dadka ayaa sidoo kale inta badan la kulmo mid ka mid ah dhibaatooyinka, ka dibna waxaa loo baahan yahay splitter wmv ah.
The video wmv waa waqti aad u dheer in ay geliyaan si ay u YouTube (ka badan 15 daqiiqo xadka).
Video wmv ayaa files aad u badan tahay in ay u diraan dadka kale. Waxaad u baahan tahay iyaga googooyaa.
Splitter wmv in Wondershare Video Converter waa qalab ku haboon si ay u kala jabeen files wmv. Waxay awood u aad kala kasta oo files wmv waaweyn galay qaybaha yar ee files oo kala duwan. Haddaba qalabka splitter wmv iyo jaray wmv video galay qaybaha aan khasaaro tayo leh si fudud oo dhaqso. Version ayaa tijaabo ah splitter wmv xor u yahay inuu kala soo bixi oo si buuxda u shaqaysa, laakiin video saarka waxay yeelan doonaan watermark ku yaal. Waxaad meesha ka saari kartaa watermark iyo aad u hesho taageero farsamo oo lacag la'aan ah ay diiwaan software ah.
Features Main ee Video Converter Ultimate
Interface dareen in aan kala tagno files wmv
Qaybsama Support wmv, MP4, AVI, MPEG, FLV, iyo qaabab loo jecel yahay oo dhan
All-in-mid video software: splitter wmv, wmv joiner, Converter wmv
Talaabooyinka fududahay in la isticmaalo Wmv Video Splitter
No tilmaamaha adag. Just qasabno yar in aan kala tagno files wmv in qaybaha iyo badalo si files shaqsi hal mar.
Talaabada 1: shuban files wmv
Ka dib markii ay soo bixi oo lagu rakibay Video Converter, waxaa lagu daahfuri oo waxaad arki doontaa daaqadaha hoose soo socda. Guji "Add Files" badhanka si ay u helaan files wmv on your computer. Ka dib markii loo doortay faylasha wmv, guji "Open" badhanka si ay u dar barnaamijka.
Talooyin : By "Load DVD" button, aad dillaaci kara DVD filimada iyo badbaadin galay qaybaha yar qaybsiga.
Talaabada 2: Iska yaree wmv in qeybaha
Si aad u kala qaybsan tahay files wmv, xaq guji galka laga keeno ee liiska dooro "Edit" doorasho. Suuqa ayaa ah splitter wmv muuqan doona iyo video ka bilaabo si toos ah u ciyaaro. Waxa aad u baahan tahay inaad soo socda sameeyo waa in lagu dhigo qaybaha adigoo isticmaalaya "Calan dhibic bilowday" iyo "dhamaadka Calan dhibic" sliders. Marka gabal ah ayaa qarka u saaran, riix batoonka maqas in aan kala tagno wmv video.
Tallaabo 3: Ka billow files wmv qaybsama
Hadda doortaan qaab loo badbaadiyo kala wmv videos. Halkan wmv ayaa weli dhigay qaab bartilmaameedka. Sidaas aad arki doonaa faylasha kala wmv in liiska la magac isku xig xiga oo ku salaysan magaca asalka ah. Ugu dambeyntii guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan qaybsama files wmv.
Wmv Splitter u Mac
Qalab qaybsama ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa in ka splitter wmv u Mac , laakiin waxa ay u shaqaysaa wax yar ka duwan version Windows. Waxaad u baahan tahay in aad ku darto wmv ku tus in daaqadaha hoose iyo mid kasta oo aan kala tagno siday u kala horreeyaan. Ugu dambeyntii, jar files wmv hal mar.
> Resource > Video > wmv Splitter: Iska yaree wmv in Dhowr qeybaha